१६ वटी छोरीका बाउले गरे १७ वर्षकी किशोरीसँग बिहे ! – Todays Nepal
डडेल्धुराको बेलापुरकी कलावती विष्ट अहिले १९ वर्षकी भइन् । उनलाई छोरा जन्माउन भन्दै १७ वर्षकै उमेरमा बैतडीको पुर्चाैडी नगरपालिका वडानम्बर १० विजयीपुरका रामबहादुर विष्टले बिहे गरे ।
श्रीमान ४५ वर्षका रामबहादुर (हाल ४७ वर्ष)सँग कलावतीका माइतीले नै विहे गरिदिएका हुन् । शारीरिक रुपमा अपांगता भएकी कलावतीकी वृद्धा आमा र साना बहिनी छन् । बुबाको पहिले नै मृत्यु भएका कारण घरमा खान बस्नको समेत समस्याभए पछि आफ्नो भार कम गर्न आमा र माइती पक्षले नै आफूलाई राम बहादुरसँग विहे गरिदिएको कलावतीले बताइन् ।
विहेको एक वर्षसम्म श्रीमान र परिवारबाट ठिकठिकै व्यवहार भयो । एक वर्ष पुगिसक्दा समेत उनी गर्भवती नभए पछि शुरु हुन थाल्यो– श्रीमान, सौता र सौताका छोरीबाट दिनरात कुटपिट र टोकसो । रामबहादुरकी जेठी श्रीमती अम्बिका विष्टबाट १६ छोरी जन्मिए । ती मध्ये पाँचको मृत्यु भयो । ११ जीवित छन् । ५ जनाको विहे भइसक्यो । ६ छोरी साथमै छन् ।
‘घरको काम, खेतबारीको काम सबै मेरै थाप्लोमा । एक्लो ज्यान कसरी सक्नु । त्यसमाथि रातदिनको अपमान’ कलावतीले रुँदै भनिन् ।
आफूलाई घर परिवारसँग बस्न निकै समस्या भइरहेको भए पनि कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने कुराको टुंगो नहुँदा कुटाइ र गाली सहन बाध्य भएको उनले बताइन् ।
कलावतीको कम्मर बांगो हुँदा उनलाई हिँड्डुल गर्न समेत गाह्रो हुन्छ । ‘छोरा जन्मे त व्यवहार पनि राम्रै हुन्थ्यो होला । छोरा जन्माउन नसकेको भन्दै देख्यो की परिवारका सबै जना झम्टिन आउँछन्’ उनले पीडा पोखिन् ।
धेरै काम गर्न नसकेको दिन र बिरामी परेको दिन त खाना समेत नदिने गरेको उनले बताइन् । ‘घरबाट निस्क भन्छन्, कुट्छन्’ कलावतीले भनिन्, ‘म कसरी छोरा जन्माउँ ? धेरै गाह्रो भइसक्यो मलाई ।’
सुनकै थालमा खाना खाने हैसियत राख्ने यी हुन् १६ नेता